Muuri News Network » Arrag Sawiro laga helay Turkish Airlines oo dib u bilawday Duulimaadkii Xamar..
Arrag Sawiro laga helay Turkish Airlines oo dib u bilawday Duulimaadkii Xamar..
Diyaaradda Turkish Airlines ayaa maanta dib u bilowday duulimaadkeedii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadib qaraxii ka dhex dhacay diyaaradii Daallo Airlines, kaasoo hakad geliyay duulimaadkii diyaarada ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradda Turkish Airlines oo ah diyaarada kaliya ee caalami ah oo duulimaad ku timaada magaalada Muqdisho ayaa hakisay howleeda 2-dii bishii Febraayo, sababo dhinaca amniga awgiis.
Rakaabkii ay maanta diyaarada keentay ayaa dalal dhowr ah, waxaana la sheegay inay dhowaan goosteen tikidhada, markii howl wadeenada shirkadda Turkish Airlines ay ku dhawaaqeen inay dib u bilaabayaan duulimaadkooda Muqdisho
Duulimaadka Diyaaradda Turkish Airlines ayaa ahaa Istanbul-Muqdisho, waxaana markii ay rakabaakii u horeeyay ka soo dejisay magaalada Muqdisho ay qaaday rakaab kale oo ku sii jeeday Jabuuti iyo Istanbul.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dib u bilaabida howlihii duulimaad ee shirkadda Turkish Airlines ay ka dambeysay markii wada hadal dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Turkiga oo saaxibo dhow ah, waxaana horay labada dhinac ka wada hadleen wax ka bedelka ammaanka garoonka.
Ammaanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoo dadka ka dhoofaya iyo kuwa ka soo degaya ay marayaan dhowr baaritaan oo banaanka iyo gudaha garoonka ah.
Weerarkii 2-dii bishii Febraayo ayaa lala damacsanaa Diyaaradda Turkish Airlines oo xilligaas baaqatay, waxaana shirkadda Daallo Airlines ay ka qaaday magaalada Muqdisho rakaabkii ay laheyd Turkish Airlines, hase yeeshee markii uu gudaha diyaarada qarax ka dhex dhacay ayay si deg deg ah dib ugu soo laabatay garoonka Muqdisho.